देउवा सरकारको चमत्कार अब वृद्ध भत्ता पाउने ७० बर्ष को उमेर ५ वर्ष: घट्दै सही की गलत ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
देउवा सरकारको चमत्कार अब वृद्ध भत्ता पाउने ७० बर्ष को उमेर ५ वर्ष: घट्दै सही की गलत ?
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम हुनुपर्ने बताएका छन् । आज बिहिबार बसेको प्रतितिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामा अहिलेको वृद्ध भत्ता ७० वर्ष माथि उमेरलाई घटाएर ६५ वर्ष बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
पहाडी भेगमा ६५ वर्षको मानिसले औषधि उपचार पाउन नसेको भन्दै सांसद लामाले बैठकमा भने , ‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्‍यो’ । अहिले ७० वर्ष भन्दा माथिकालाई मासिक ४ हजार वृद्ध भत्ता सरकारले वितरण गर्दै आएको छ ।
श्रीमानलाई देखाउनकै लागि भएपनि अर्को बिहे गर्न चाहन्छु म कोही केटा छन् ? भने सम्पर्क गर्नुहोस् । म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो ।
हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो ।घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो ।
एक दिन श्रीमान्ले केके सुनेर आउनुभयो, अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो । त्यो दिनदेखि त मेरा श्रीमान्ले सँधैँजसो केही न केही इजरायलका बारेमा नयाँ कुरा ल्याएर मलाई दिनहुँ जसो सुनाउने गर्न थाल्नुभयो ।
एक दिन मैले झर्को मान्दै भने हामीलाई के काम इजरायलको गफ । न जाने गाउँको बाटै नसोध्नू ।किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल १ अब त केटाकेटी पनि ठूला हुँदै गए, भोलि उनीहरूको उच्च शिक्षाका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हाम्रो कमाइ तन्किने होइन, बरु म यहाँ केटाकेटी स्याहारेर बस्छु तिमी जाऊ इजरायल र हाम्रो पनि आर्थिक हैसियत अलि उकासौँ । किन नजाने गाउँको बाटै नसोध्नू भन्छ्यौ । हामीले कहिले आफ्नो घर बनाउने ।